Mashandisiro ekushandisa | Art sens - mazano eimba nebindu
Art Sense ibhuku repamhepo rekupa mazano uye ruzivo. Ivo vane rusarura uye havana mari kana zvimwe zvakabatsirika zvezvenhau. Art Sense inoburitsa kushambadza kunopa mari kubhadhara mari yechisimba yemubhadharo.
Art Sense haibuditse purofiti, asi ine chinangwa chekusimudzira ruzivo uye ruzivo rwevashandisi vari mumapoka makuru epasiti.
Muridzi wemapikicha uye zvinyorwa
Art Sense inogadzira, inogamuchira kubva kune vashandisi uye inounganidza zvemahara zvinhu kubva kune yakasununguka internet nzvimbo pasina chiratidzo chekodhi yemifananidzo. Mifananidzo ye copyright inoshambadzirwa uye iyo data yakachengetedzwa uye inobatwa zvinoenderana neiyo yakaburitswa Policy. Imwe yega yega mifananidzo yakaburitswa inoenda kuburikidza nekuveza mifananidzo yevara, mutsauko, mhando, kugadzirisa, nezvimwe, ndosaka siginecha yakanamirwa. Haadi kuti ari munyori.
Art Sense inozobvisa pakarepo chero mufananidzo uyo mugadziri wayo anga asingabvumirane nayo uye yakapa chiratidzo chisingaverengeki chekunyora.
Mavara ese ari paArt Sense saiti anogadzirwa nevanogadzira saiti kana anopiwa kechitatu mapato muchimiro chezvinyorwa.
Muridzi wechitatu-bato zvinoburitswa uye zviri mukati
Art Sense ine mvumo yekushambadza, nekufunga kwayo, zvinhu zvekune dzimwe nyika zvakagamuchirwa, uye haisi mhosva yeiyo chivakwa, asi chete pane zviri mukati. Zvinogumbura, zvinogumbura kana zvekusarura zvemukati hazvizoshivirirwe mune chero kutumira kana chirevo.
Chikwata cheArt Sense chinotenda kuti kuyedza chero kwemaitiro akadai kana kusasarudzika zvinyorwa nevadharisi zvinokurumidza kutaurwa nevashandisi.
Kuzadzikiswa kwepfungwa dzakurudzirwa pane ino saiti
Art Sense haina chekuita nekusagadziriswa kwekushandisa kwepfungwa dzakatsanangurwa pane ino saiti.
Art Sense inokurudzira kuti avo chete vane ruzivo rwehupfumi rwakaringana nekunetseka kwemabikirwo akakodzera vanofanira kuita kubika. Misiyano inogoneka zvichienderana nezvinhu zvakawanda muzvigadzirwa uye mukuravira. Izvo zvikamu zvinoratidzwa zvinoratidza uye zvinobvumidza misiyano muzviyero kusvika ku20% yeiyo kukosha kukosha yakadudzirwa kuchinjika kumuyero unorema uye / kana huwandu hwemamita.
Art Sense haikurudzi munzira ipi neipi, asi pane zvinopesana - inokurudzira kudzivirirwa nevanhu vasina ruzivo rwakakwana, ruzivo kana hunhu, shanda nekucheka, kuchera kana humwe michina uye / kana magetsi nemidziyo ine njodzi yekukuvara.
Art Sense inonyevera kuti kuvakwa kwemhando ipi neipi yechigadzirwa nevanhu vasina dzidzo yakakodzera kunoisa panjodzi yekukuvara kana kukuvara.
Art Sense inozokwidza uye nekushandura aya Mitemo, pamwe neyakavanzika Policy yavo chero nguva, kusangana nekuchinja kwenzvimbo uye zvinodiwa nevashandisi vayo.